Izindaba - Umfutholuketshezi cindezela
emakethe eJiangsu, Zhejiang, eShanghai, eYangtze River Delta, ePearl River Delta, evame ukusetshenziswa ekuhlolweni kwepayipi okufana nepayipi lensimbi elingenamthungo, ipayipi lensimbi engagqwali, ipayipi le-titanium alloy, ipayipi lethusi, ipayipi le-aluminium. Inkolelo enkulu yenkampani yethu ukukhiqiza umshini wokubacindezela ukunikeza imishini yokuhlola esezingeni eliphakeme nekhwalithi ephezulu ukuvala igebe emakethe. Umshini wokubacindezela ungahlukaniswa wohlobo oluzenzakalelayo nohlobo lwencwadi. Uhlobo lwemanuwali lungahlola amapayipi amane ngasikhathi sinye, kepha ludinga umsebenzi wezandla. Ukubeka, ukubeka uphawu, ukucindezela nokucindezela kuyazenzakalela. Ubude bepayipi bungashintshwa ngo-2-15m ukuhlangabezana nezidingo zamapayipi ahlukene angenamthungo ikhasimende.
Uhlobo oluzenzakalelayo: ithubhu eyodwa kuphela engahlolwa ngasikhathi. Ishubhu lingena ngokuzenzakalela ku-rack, licubungula ngokuzenzakalela izinto zokwakha, lihlunge ngokuzenzakalela, izikhundla, lihlanze, izimpawu, izibopho kanye nokucindezela konke ngokuzenzakalela; ingxenye yokubeka engezansi ihlunga ngokuzenzakalela imikhiqizo eyiqiniso futhi enesici. Idlala indima ebalulekile ekukhiqizeni kwangempela. Enye ukonga izindleko, kepha ukonga abasebenzi nokwenza ngcono izinga lokuvuselelwa kwamapayipi.
Umshini wokubacindezela owenziwa yinkampani yethu usetshenziswa kakhulu ekutholakaleni kwekhwalithi yomkhiqizo wabenzi bamapayipi, futhi uyisidingo esibalulekile nesibalulekile semishini yokuqhumisa. Manje ithuthukiswe ngempumelelo: uhlobo lwenqubo nohlobo oluzenzakalelayo. Uyemukelwa amakhasimende amasha namadala ukuze nixoxisane!